मधुपर्क, २०६६ कात्तिक 'स्मृति'को सानो रेखी हाल्दा -राममणि रिसाल सुरुमा प्रसङ्ग अँगाल्दा महाकवि स्वर्गीय लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 'शतवाषिर्की' विशेषाङ्कका रूपमा २०६६ साल कात्तिक महिनाको 'मधुपर्क' अङ्क प्रकाशित हुने भएबाट अहिले खुसी र दायित्व दुवै एकैसाथ थपिन आएको ठान्छु, ममाथि । साथै मधुपर्क परिवारको यो अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य-योजना भएकाले 'धन्य' भन्छु ।
आधा शताब्दी अगि दिवङ्गत भएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली भाषा र साहित्य जगत्का अमर स्रष्टा हुन् । 'नभूतो नभविष्यति' एक अद्वितीय प्रज्ञापुत्र र महिमाशाली महान् देवकोटा हुन् भन्ने कुरो यस पङ्क्तिकारका भित्री मनले धेरै अघिदेखि स्वीकार्दै आइरहेको छ । स्वदेश र विदेशमा बहुप्रशंसित स्व. देवकोटा थिए । असाधारण काव्य पुरुष साधारणताभित्रको असाधारणता महान् महाकविका विषयमा कुरो चल्दा उठ्ने आफैँ अनेक सँग-प्रसङ्ग । तिनलाई केही नसम्झी फेरि म बिर्सुं र बढेँ अगि कसोरी ? फसाद, तिनको क्रमबद्धता कायम राख्नेसमेत मजस्तोलाई हुने धेरै कठिन फेरि चिनारीका फाँटहरू पनि छन् । बेग्लाबेग्लै दर्जनौँ कृतिको मूर्धन्य स्रष्टा र सृष्टिका बीचको सम्बन्ध अगाध अपार । यसरी, 'स्मृति' स्वयं हुने कहिले पवित्र पूजा र कहिले गहिरो पीडा । के ढाँटौँ, रेखी हाल्न नै भो गाह्रो ।
पहिले न चिन्दा र पछि चिन्दा उठ्ने उपेक्षा र अपेक्षाका रङ्ग-तरङ्गले अझ पारिदिने सबै फरक । प्राणान्तसम्म एकनास र सद्भाव, सहभाव र समभाव राख्न सक्ने महामना त्यस सिर्जनकर्ताको विशेष योगदान अपूर्व काव्य धारा । नेपाली मात्रका लागि यही अनमोल सम्पत्ति उनी हाम्रा र हामी उनैका साझा । धरती-पिरती सबै-सबैका आशा गरौँ, खुल्ला हाम्रो तेस्रो आँखा, होला सोच-खोज सबै ।
समयान्तरमा नेपाली भाषा र साहित्यको प्राध्यापन कार्य गरें । 'त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आँगनीमा झण्डै साढे दुई दशक जति विस�